Sida loogu beddelo magaca isticmaalaha Pokémon Go | Wararka IPhone
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Pokémon Go waxay la timid muuqaalo badan oo cusub. Xaqiiqdii, Niantic wuxuu xaqiijiyay in ciyaartu ay ficil ahaan tahay beta waxa mustaqbalka noqon doona. Hadda, waxay noo oggolaan doontaa inaan ku beddelno magaca adeegsadeena Pokémon Go, si kastaba ha noqotee, waxay noo oggolaan doontaa oo keliya hal jeer, sidaa darteed waa inaan aad uga taxaddarnaa. Haddii aan helnay isticmaaleyaal leh magacyo la mid ah kuweenna ama aan ka qoomameyno magaca aan doorannay waqtigaas maxaa yeelay ma aanan ogeyn in ciyaarta ay ku soo kordhayso sumcad aad u badan, Waxaan ku tusineynaa sida loo badalo magaca isticmaalaha Pokémon Go oo leh seddex talaabo oo fudud.
Runtii waa wax iska fudud, waxaana jira sawirro badan oo madax ah oo lagu ogaanayo sida loo sameeyo. In kasta oo ay jiraan wax kasta, had iyo jeer waxaa jira isticmaaleyaal aan si fudud ku helin shaqooyinka maxaa yeelay iyagu ma aysan marin habsami u socodka menu Pokémon Go oo ku filan oo aan aqoon u lahayn. Marka hore, waxaan gujineynaa Poké Ball oo aan ka helno sanadle bartamaha hoose ee shaashadda Pokémon Go navigation. Markii aan gelayno liiska soo socda, geeska kore ee midig waxaan ka helaynaa sawirka agabkan caadiga ah iyo kan wakiilka ah markay doonayaan inay muujiyaan in goobaha ay jiraan.
Dejinta ka mid ah, waxaan arki doonaa laba cusub, midka hore ee «lasheekeestaa keydinta de tamarta»Taasi way soo noqotay, Niantic wuxuu arkay inuu haboon yahay inuu dhaqso u soo nooleeyo. Goobta kale ee cusubi waa «Beddel Naaneys«. Mar alla markii aan riixno, waxaan ogaan doonnaa in pop-up uu soo muuqan doono oo tilmaamaya in naloo oggolaan doono oo keliya inaan naanaysta beddelno hal mar, sidaa darteed waa inaan si wanaagsan u dooranno. Si loo saxo, tani waa markii labaad ee ay noo ogolaadeen inaan wax ka bedelno naanaysta, waxaan filayaa inay heleen dad badan oo adeegsadayaal qoomamo leh oo u diray emailada cabashada Niantic. Marka, waxaad horeyba u ogayd sida magacaaga loogu beddelo Pokémon Go. Haddii aad rabto casharro dheeraad ah ama aad leedahay talooyin aad la wadaagto, ha ka waaban, u daa sanduuqa faallooyinka qiiqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loogu beddelo magaca adeegsadeena Pokémon Go
Google waxay ku maadeysaa 16 GB iPhone si kor loogu qaado Sawirada Google